Warring:Unresponsive script error in Firefox !! ပြဿနာဖြေရှင်းနည်း !! | zawthwin(android software/gameနှင့်မြန်မာစာအုပ်စင်) ကိုဇော်သွင်မျှဝေပေးပြီ
Warring:Unresponsive script error in Firefox !! ပြဿနာဖြေရှင်းနည်း !!
Posted on November 26, 2013 by zawthwinကိုဇော်သွင်(စန္ဒယား နှင့် ကီးဘုတ်)	အခုဆိုဒ်တော်တော်များများမှာ လာလည်တဲ့လူတွေအများဆုံးကြုံတွေနေရတဲ့ ပြဿနာကတော့Warring:Unresponsive script error in Firefox ဆိုတဲ့ ပြဿနာပါပဲ ဒီစာတန်းဝင်လာရင် ဘာမှကိုဆက်လုပ်လို့မရတော့ပါဘူး။ စက်တစ်ခုလုံးရပ်ထားရတဲ့အနေအထားပါပဲ။ ကျွန်တော်ဘလော့စ်မှာလည်းမကြာသေးခင်ကပဲ လာရောက်ပြောဆိုသွားပါတယ်။ လာလည်တိုင်းဒီလိုအမြဲဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးဖို့အောက်မှာဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတာ ပုံလေးတွေနဲ့ရှင်းပြပေးသွားပါမယ်။အရင်ဆုံးမိမိအသုံးပြုနေတဲ့ Firefox ကနေပြထားတဲ့အတိုင်း about:config လို့ထည့်ပြီးရိုက်လိုက်ပါ။(without quotes)..ကော်ပီကူးပြီးထည့်လဲရပါတယ်။စာလုံးမခြားပါနဲ့…
ပြီးရင် Firefox ရဲ့ သတိပေးတဲ့စာတန်းပေါ်လာပါမယ်။ ဘာမှမကြောက်ပါနဲ့ “I”II be careful,I promise!ဆိုတဲ့ စာပေါ်လာရင် နှိပ်လိုက်ပါ။
ပြီးရင်အောက်မှာပြထားတဲ့ ပုံပေါ်လာပါမယ်။ dom.max_script_run_time ဆိုတာကို Search ထဲမှာထည့်ပြီး Enter ခေါက်လိုက်ပါ။
Search ဘောက်ထဲမှာထည့်လိုက်တာနဲ့ အခုလိုပေါ်လာပါမယ်။ အောက်မှာစာတန်းတစ်ခုပေါ်လာရင်
အဲ့ဒီ့စာတန်းပေါ်မှာ double click နှိပ်ပြီး Enter ခေါက်လိုက်ပါ။ နောက်ထပ်ဘောက်တစ်ခုကျလာပါမယ်။
ကျလာတဲ့ဘောက်ကနေ ပုံမှန်အားဖြင့် 10 Value ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွံန်တော်တို့က20 လို့ပြောင်းပေးလိုက်ပါ။ ပြီးရင် Ok နှိပ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် ကျွန်တော်တို့ new tab ဖွင့်လိုက်ပါ။ရှိနေတဲ့ tab တွေကိုအကုန်ပိတ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် Firefox ဘောက်ကို Restart လုပ်လိုက်ပါ။ပိတ်ပြီးပြန်ဖွင့်လိုက်ပါ။ ပြီးရင်ကျွန်တော်တိတို့ Warring:Unresponsive script error ဆိုတဲ့ပေါ်တဲ့ဆိုဒ်ကို သွားကြည့်ပါ။ ပေါ်သေးလားဆိုတာ လက်တွေ့စမ်းသပ်ကြည့်လိုက်ပါ။အရင်လိုမပေါ်တော့ဘူးဆိုတာ လက်တွေ့တွေ့ရမှာပါ။ Flash error ပြတဲ့ဘောက်ကတော့ ပိတ်လိုက်ရင်ပြောက်သွားမှာပါ။ Warring:Unresponsive script error ဆိုတဲ့ဘောက်ကြီးကတော့ ပေါ်လာစရာအကြောင်းမရှိတော့ပါဘူး။ အားလုံးပဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တင်သမျှပိုစ့်တွေ Facebook ကနေရယူချင်တယ်ဆိုရင် ဒီမှာ Like နှိပ်ပါ မန်ဘာဝင်ခဲ့ခြင်းဖြင့် ပိုစ့်အသစ်တင်တိုင်း မိမိ Gmail ထဲကိုတိုက်ရိုက်ရောက်ရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်မန်ဘာဝင်ခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
← Fake Call & SMS & Call Logs Pro 3.9 Full APK	Football Manager Handheld 2014 APK DATA 5.0.3 Premium Games Android →